Gabar 5 jir aheyd oo nin baaskiil cusub u iibiyey oo ka raadisay Holland 24 sano kadib… – Hagaag.com
Posted on 17 Agoosto 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waxaa mar walba ku taagnaa Sawirka Baaskiilka cusub ee uu siiyey nin dahsoon markay ahayd shan sano jir iyadoo ku jirtay xarun qaxooti oo ku taal Netherlands arrintaasi ayaa ka go’i weysay xusuusteeda qaxootiyadan Kurdiyada ah Mevan Babiker oo iyada iyo qoyskeeda ka soo cararay Ciraag dagaalkii Khaliijka.
Mevan, oo ah 29-jir, ayaa sheegtay in hadiyadda deeqsinimada leh ee ugu deeqay nin aysan xasuusan karin oo ku jiray maskaxdeeda in ka badan labaatan sano, sheekada la kulankeeda ninkaasi ayey aheyd mid muddo dheer ka raadineysay baraha bulshada sida Twitter-ka.
Mevan waxay tiri: “Waxaan ahaa shan sano jir markii naloo diray xarunta qaxoontiga ee Zwolle, Netherlands, 1990-yadii, ninkani oo u shaqeeynayey Hay’ad caawisa qaxootiga ayaa ii iibiyey baaskiil iina siiyey hadiyad ahaan, mala soo koobi karo farxada qalbigeyga”.
Mevan ma ilaawin deeqsinimada iyo naxariista ninkaasi, sidaa darteed waxay barteeda Twitter-ka ku baafisay ninkaasi iyadoo weydiisatay caawimaad si ay ugu raadiyaan ninkaasi, fariinta ayaa waxaa weheliyey sawir si deg deg ah hooyadeed ku qaaday oo iyada iyo ninka ah.
“Waxaan xasuustaa sida aan dareemay waqtigaas, waxay ahayd dareen gaar ah oo saameyn weyn igu yeeshay, waxaanan is idhi, Miyaan ahay qof khaas ah oo u qalma hadiyad weyn?”
Saacado gudahood nin la yiraahdo van der, oo si tabaruc ugu shaqeeya xarun warbaahineed magaalada Swolla ayaa aqoonsaday qofka.
“Waan fiiriyay sawirka waxaanan isla markiiba gartay ninkaasi oo aan la shaqeeyay markii aan jiray 20da. Waxaan ku aqaanay nin deggan, oo aad u naxariis badan,” ayuu yiri van der.
Van der ayaa wuxuu isku dayay inuu xasuusto magaca ninka, laakiin xasuustiisa ma caawinin, wuxuu kula xiriiray asxaabtiisa baraha bulshada, waxayna awood u yeesheen in ay la xiriiraan xubno qoyskiisa ka tirsan.
Markii Van der uu la xiriiray ninka, wuxuu u sheegay haddii uu xasuusto Mevan iyo hooyadeed, markasta wuxuu u sheegi jiray xaaskiisa inuu aad u jeclaan lahaa inuu arko Mevan iyo hooyadeed mar kale noloshiisa.
Labada ayaa si dhakhso leh u abaabulay kulan ay la yeeshaan Mevan iyo hooyadeed si dhakhso leh ka hor inta aanu ka dhammaan fasaxa Mevan ee Netherlands.
Habeenkii xigay, Mevan waxay la kulantay Eichbert, ninka lahaa sawirka, kaasoo yiri, “Baaskiilku wuxuu ahaa tilmaan yar oo aniga iga timid, laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay inay Mevan dib ugu soo noqoto noloshayda.”
Kulankoodii ka dib, waxay labadoodu wada fadhiyeen muddo dheer, iyagoo galay xusuuso iyo sheekooyin oo ku saabsan waqtigii ay ku qaadatay xarunta qaxootiga.
Van Der, oo ka qeyb galay kulanka, ayaa sheegay inuusan la yaab ku aheyn naxariista Eichbert, laakiin wuxuu sheegay isu imaatinka inuu ahaa mid ka weynaa baaskiil.
Mevan ayaa waxay la yaabtay tirada farriimaha ay ka heshay adduunka oo dhan, iyada oo loo rajeynaya in ay la xiriirto qofka ay raadineysay oo qeyb ka qaadatay nolosheeda.
Tallaabada Mevan ayaa waxay kicisay tobaneeyo qaxooti ah oo adduunka ku nool si ay ula wadaagaan sheekooyinkooda iyo sawirrada dadka shisheeyaha ah ee noloshooda saameyn wanaagsan ku yeeshay.